२७ वर्षीया सृजना बनिन् सांसद – Bihani Khabar
Home / News / २७ वर्षीया सृजना बनिन् सांसद
२७ वर्षीया सृजना बनिन् सांसद
पुस १३, काठमाडौं । २७ वर्षीया सृजना सैँजुलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रदेश नंम्बर ३ को सांसद बनाएको छ। नेमकिपाले प्रदेश नं ३ मा समानुपातिक तर्फ एक सिट मात्र प्राप्त गरेको थियो।नेमकिपाले बुधबार सैँजुलाई प्रदेश सांसद निर्वाचित गर्दै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएको हो। उनी हाल नेमकिपाको सेल कमिटीको उपाध्यक्ष छिन्। उनी नेमकिपाको भातृ संगठन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य भैसकेकी छिन्।सृजना नेमकिपाको आस्था सांस्कृतिक परिवारको पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। सेतोपाटी
लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब पठाउँदै
बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गर्ने भएको छ। बैंकले आइतबार ५ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पठाउने भएको हो।राष्ट्र बैंकले विकास ऋणपत्र खरिद गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रकम दिनेछ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सोझै बोलकबोल गरी ऋणपत्र खरिद गर्ने जनाएको छ।
सो बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणपत्रको सिरिज नम्वर, परिमाण र बिक्री गर्ने मूल्य तोकेर रकम आह्वान गर्न सक्ने छन्। ऋणपत्रको खरिदबाट बैंकिङ प्रणालीमा ५ अर्ब जाने र यसले तत्कालका लागि तरलताको असहज परिस्थितिलाई समाधान गर्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अहिले ३३ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ। यद्यपी यो रकम ज्यादै न्यून भएको बैंकहरुले जनाएका छन्। जसले गर्दा पछिल्ला दिनमा वाणिज्य बैंक नै व्यक्तिगत मुद्दतिमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर तोकेर निक्षेप तान्ने होडबाजीमा उत्रिएका छन्।
समयमै विकास खर्च नहुने परिपाटीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको बैंकर्सको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा ९. २६ प्रतिशत अर्थात ३१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यसले गर्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको छ।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल विकास खर्च समयमै नहुनु नै तरलता अभावको मूख्य जड भएको बताउँछन्। ‘विकास खर्च भइरहेको छैन, त्यसमाथि पुस राजश्व बुझाउनुपर्ने महिना भएकाले पनि तरलतामा चाप परेको हो’ उनले भने।
राजश्व रकम उठिरहँदा त्यहीअनुसार खर्च नहुदा यतिबेला लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको उनले बताए। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको कात्तिकसम्म सरकारी खातामा ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रकम थन्किएको छ।
त्यस्तै एनसेलले आफ्नो लाभांश रकम लैजाने भएपछि त्यसले तरलतामा थप असर पार्ने बैंकर्स बताउँछन्। एनसेलले आफूले झिक्ने रकम तयार गर्न खाता भएका बैंकहरुलाई आग्रह गरेसँगै ति बैंकहरुले विभिन्न संस्थाहरुबाट उच्च व्याजदरमा निक्षेप कबुल गरी संकलनको प्रक्रिया थालेका छन्। from setopati.com
Previous प्रधानमन्त्री देउवाले उल्टोबाट सिठ्ठी फुकेको भिडियो फेसबुकमा भाइरल !
Next अन्ततः उपेन्द्र यादव पनि वाम गठबन्धन कै लाइनमा, भने -“ओलि जि लाई प्रधानमन्त्री स्विकार्न तयार छौं”
लिम्बुवान र राप्रपाका अध्यक्षसहित सयौ कार्यकर्ता संघीय फोरममा प्रवेश
सशस्त्र प्रहरी जवान हत्यामा दुई युवतीसहित ६ पक्राउ